Tsigira | Wuhan Goridhe Laser Co, Ltd.
Golden Laser SERVICE KWEZVISUNGO
Standardization Mubasa "212"
2: Achipindura muna 2 maawa
1: zvinopa mhinduro muna 1 zuva.
2: kupedza chichemo muna 2 pamazuva
"1 + 6" Services Complete Specification
Chero renyu Laser michina akatengwa kubva Golden Laser vanoda chokugadza kana Nokuraramisa, tingadai kupa "1 + 6" mabasa vakakwana.
Mumwe Installation Service "imwe-nguva OK"
Nhanhatu Complete Services
1. Machinery uye dunhu Check
Tsanangura mashandiro anoita muchina zvikamu uye nechokwadi muchina ndicho refu oparesheni.
Tsanangura kushandiswa michina uye software. Atungamirire mutengi kwakafanira vatiitire chigadzirwa upenyu uye kuderedza simba rakawanda.
3. Nokuraramisa Machine
Tsanangura kwerunyararo muchina zvikamu kuratidza chigadzirwa upenyu uye kuponesa simba rakawanda
4. Product Process gwaro
Zvichienderana siyana zvinhu, regai muchizviedza kuti Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri kubudiswa parameters kuitira hwakanakisisa zvigadzirwa.
5. Site mabasa dzakachena-up
Geza mutengi nzvimbo kana basa rapera.
6. Customer Kukoshesa
Customers kupa kuMudzidzisi mashoko uye kureva nezvokushumira uye kugadzwa vashandi.
Mashoko zviri kuzununguswa. Tinenge titevere kunakisa zvinhu, asi tinofanira kunyatsoteerera basa, uye pamusoro zvigadzirwa sezvo upenyu, izvo vachamhanya kuburikidza pre-sale, kutengeswa uye pashure-okutengesa basa rose upenyu mishonga, uye kuedza kusika kukosha-akawedzera kuti vatengi.
SERVICE MISORO PAMWE
Golden Laser ane zvikuru simba hwokugadzira chikwata uye zvakanaka pashure-okutengesa basa.
1. Mumwe nomumwe pashure-rokutengesa vashandi basa yendarama Laser ane dhigirii kana kumusoro, uye mumwe nomumwe pashure-rokutengesa vashandi basa kwave kuchiita refu-refu rekambani kurovedzwa uye vakapfuura redu Michina kupima hurongwa asati vanopupurirwa kuti basa.
2. Nyaya vatengi vanogara vokutanga, uye ndicho hauzununguki basa hanya uye kumuremekedza ose mutengi. We hunovimbisa kuti kubva kugamuchirwa zvichemo kuna on-nzvimbo basa, chikumbiro ose kubva mutengi achapiwa zvakazara inobhadharwa yendarama Laser.
3. yendarama Laser webasa centre vachatitaka nguva pashure-rokutengesa vashandi basa kuti zvekushandisa kudzidziswa, update hwokugadzira ruzivo uye kuvandudza unyanzvi basa.
Kuitira kuona kusimudzira kwekushandirwa kwevatengi, isu takamisawo makwikwi mashandiro uye nzira yekuchengetedza matarenda ekupona kwevanhu vakasimba uye vane tarenda, kuitira kuti vave nechokwadi chekuti vashandisi vanowana mabasa anoenderera anogutsa.
- Wuhan Goridhe Laser Co, Ltd.